What parents should know about the VR gear kids want - Myanmar Tech News
Zenfone7နဲ့7Pr...
GeForce MX450 မှာ ...
Galaxy Note20 Ultra မ�...
Myanmar Tech News
admin | November 17, 2016 | Tech News | No Comments
VR Headsets: Best for Big Kids and Tweens
Super-powerful headsets: Best for Teens
Comes with everything to make VRareality — except the computer:aheadset,asensor,aremote, cables, an Xbox controller, andagame.
Galaxy Note20 Ultra မော်ဒယ်တချို့မှာ အပူတက်လွယ်တဲ့ ပြဿနာရှိနေတယ်
HUAWEI nova 7SE ရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ အချက်က ဘာဖြစ်မလဲ?
World’s Fastest Supercomputer Used to Fight COVID-19
GeForce MX450 မှာ ပါဝင်လာတဲ့ အားသာချက်များ
“ကိုယ့်မှာ ရှိတာကို ပြပြီးစားချင်လို့ မော်ဒယ် ဝင်လုပ်တာ” လို့ ပြောလာတဲ့ ရွှေအိမ်စည်
Zenfone7နဲ့7Pro မော်ဒယ်နှစ်မျိုးရဲ့ Specification Highlight
Fall Guys မိုဘိုင်းဂိမ်း အဖြစ် မြင်ရဖို့ ပေါက်ကြားလာပြီ
© 2020 Myanmar Tech News.